7 Best Uhambo Usuku Ukusuka eVenice | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Best Uhambo Usuku Ukusuka eVenice
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 21/02/2020)
Njengoko wazi yonke, Venice nguye kakhulu emzini bahluke esimnandi kulo lonke elaseYurophu, ukuba ihlabathi. AmaTaliyane wenza ngokupheleleyo aphume imisele zicatshulwa ezincinane, zonke ezo kulala kwisiqithi. Oku kuye lwaba kwidolophu kwenye yeendawo ezininzi ezintle eYurophu. Kodwa sonke siyazi ukuba. Yintoni abaninzi abazi kukuba kukho ngaphandle ngaphezulu yaseVenice. That is why we wanted to prepare a list of some of the best day trips from Venice. Wena akuyi kudana ngayo nayiphi na kwezi amazwe kunye indawo. ke, ukuba unomdla ukutyelela amanye indawo umdla nge train, ukufunda kugcina 7 Best Uhambo Usuku Ukusuka Venice In Italy!
1. Omnye Of The Day Uhambo Best kakhulu Ukusuka eVenice yi: Verona
Verona kukuba dolophu enye imilingo kwingingqi Veneto, Northern Italy wonke uyazi. UShakespeare wenza obungunaphakade xa wagqiba ukusebenzisa yona njengoko indawo abadumile Romeo and Juliet umdlalo wakhe. namhlanje, idolophu zithandwa kakhulu, kwaye unelungelo lokuba.
Uya kufumana Verona nentle kakhulu, kwaye yenye kuyiwa best ngokuba kuhambo lweentsuku ukusuka eVenice. Ukuba ufuna ukuya khona ngololiwe, uya kukufumanisa ukuba abe engcono ukhetho emsinya xa usiya eVenice.
Abo bathanda Italy ukuba Florence yenye yeendawo phambili kutyelelo. Kwakhona enye zawo ezingqongileyo kakhulu ukuba bahambele uhambo usuku lonke ukususela eVenice.
Abantu abaninzi zigcina ukulibala ukuba bakwazi ukufikelela kwi eVenice kuba uqhela kude. kunjalo, uyakwazi ukufikelela Florence ukusuka eVenice e iiyure ezimbini kuphela ukhwele uloliwe obaleka ngesantya esiphezulu. Ngalo ndlela, nani niya kufumana ukubona abaninzi ekumeni emangalisa saa kulo lonke ilizwe phakathi eVenice Florence.
Izinto eziphambili uya kufika amava Florence izitalato enomtsalane kwaye kwihlabathi-owaziwayo Florence Cathedral okanye Duomo ukwenza Firenze. Xa ucinga ukuba, Florence iba yindawo enomtsalane bonke abahambi.
3. Omnye Of The Uhambo Best Ngosuku Ukusuka eVenice: Padua
Asinguye wonke umntu uyamazi wasePadua (IsiTaliyani: Padova), kodwa kusenjalo njengendawo enye uhambo imini ephezulu eVenice. Oku kungenxa yokuba dolophu into isixeko esikhulu Italian kufuneka ukuba. Esithetha ngokwendalo ngayo ukutya enkulu, izakhiwo emangalisa, kunye piazzas ezimangalisayo.
yimpumelelo kakhulu Ukuya ukusuka eVenice ukuya wasePadua nge train njengoko uhambe uhamba kwezinye iindawo ubambe in Italy. Plus, nje ikwa ukhetho kakhulu fastest ukhululekile kwaye iyafumaneka kuwe.
Xa ufika wasePadua, Qinisekisa ukuba utyelele iziko isixeko Prato della Valle. Yenye lwezikweri ephambili dolophu, kwaye uzaliswe eqingqiweyo eqaqambileyo umntu akakwazi ngoyaba.
EVenice ku wasePadua Uqeqesha
Lake Garda nguye chibi likhulu Italy. Kwakhona enye edume kakhulu. Yaye unesizathu ukuba. Ichibi singqongwe yonke indalo ubuhle angabonelela. Uya kufumana magnolias, nemisipres, izihlahla, neminquma, Dolomite iintaba lukhulu ngakumbi malunga Lake Garda.
Uyakwazi ukufikelela iidolophu eziliqela kunxweme chibi Venice. kunjalo, sivakalelwa kukuba ezimbini uhambo best imini eVenice ukuya Lake Garda kufuneka ibandakanye imizi Peschiera and Sirmione. Fika kwindawo oya kuyo kunye Lake Garda, ungakwazi ukuthatha enye oololiwe eziliqela ukuba yonke imihla ikhefu Venice.
5. Omnye Of The Uhambo Best Ngosuku Ukusuka eVenice: Siena
Asinguye wonke umntu uyamazi Siena, kodwa akukho idolophu ofuna miss. Yeyona Likhonkco Tuscany kunye kakhulu ngokukhethekileyo langa town ephakathi uya kuze ufika ukubona.
Le dolophu encinane, kodwa lalidume yayo izitrato cobbled kwaye main isikwere ebalaseleyo eyaziwa ngokuba Piazza del Campo. kwakhona, Iintlawulo ebezisalele Magnia Tower imi kwi square efanayo, yaye isakhiwo mde uya kubona e Siena.
the train ride is a bit elide njengoko idolophu kude. kunjalo, ekubeni Siena mncane, ungakwazi sisenalo uhambo imini elimangalisayo eVenice ukuba ugqibe ukuya khona.
EVenice ku Siena Uqeqesha
Siena ayikho dolophu kuphela ezinhle Tuscany. San Gimignano lelinye. Zombini ezi zamagugu UNESCO, kodwa kuphela San Gimignano nga yothuse wena kunye nesibhakabhaka yawo yenziwe iinqaba amaninzi ephakathi. Oku ngokwenene emehlweni ukubona omnye kuni Ndingawulibali.
ngokwendalo, ungatyelela idolophu nge train njengoko yindlela elula kwaye fastest ukufikelela isayithi Venice. Kuthini okuthe vetshe, nawe uya kubona nesibhakabhaka ezinde ekhankanywe ngasentla ukusuka intuthuzelo le mihla uloliwe Italian.
EVenice ku San Gimignano Uqeqesha
Trieste ke ikomkhulu Friuli Venezia kummandla Giulia amanga kwi nomda Slovenia. It has a ekhethekileyo kuzo zonke Italy kwaye ibe yinxalenye lizwe ukuze ngokulambisa 70 iminyaka. Ngenxa kule, Trieste ukuxuba eyodwa iimpembelelo aliqela aseYurophu.
kunjalo, ukuba umxube nto eyenza kube okhethekileyo emangalisayo indawo kotyelelo. Unga ukufikelela isixeko ngokulula nge loliwe e Venice. yonke hambo lifutshane kakhulu, kodwa yinxalenye ebalulekileyo kukuba icanda unxweme Italian elihle. Yonke loo ngokuqinisekileyo kwenza njengendawo elisemagqabini omnye uhambo lwakho imini eVenice.
EVenice ku Trieste Uqeqesha
Key Takeaways Malunga Best Uhambo Usuku Ukusuka eVenice
Konke kwinto enye, Venice, use- entle. Ufumana ukuhamba ukuya kwiindawo ezininzi umdla kuzo ezininzi Italy ngokulula. Plus, ukuba indawo efanayo ivumela zonke ezi iihambo mini eVenice ezininzi.
Ukuba ngaba ukulungele ukuqalisa enye yezi adventures, konke ufuna ukuyenza pick lwakho oyithandayo. Ngoko konke oko ekhohlo kukuba wena ukwenze nje ukuya kwisikhululo sikaloliwe. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, uzive ukhululekile contact Gcina A Isitimela, kwaye siya kukuvuyela ukukunceda.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “7 Best Uhambo Usuku Ukusuka Venice In Italy” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-venice%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
europetravel GardaLake Padua trainjourney ukuhamba-hamba travelitaly Trieste Verona